Anyị ekekọrịtala usoro nkwanye ọdịnaya ndị ọzọ dịka Ọpụpụ. Kedu ihe ma ọ bụrụ na ọdịnaya gị abụghị ederede na ọdịdị, agbanyeghị, ọ na-ahụkarị - dị ka Kupọns, eserese ozi, eserese ahịa, ịkpọ oku na ime ihe ma ọ bụ foto? Reachli bụ netwọkụ mgbasa ozi ọhụụ.
N'ihi otu egwuregwu na HCCMIS, a mkpuchi njem ụlọ ọrụ, maka igosi m saịtị ahụ taa. Ndị ahịa ahụ nọ ebe ahụ na-arụ ọrụ dị egwu na-akwalite ọdịnaya anya ma na-enweta nnukwu nzaghachi! Ha bụ ọkaibe B2C ndị ahịa na-anwale ma tụọ ihe niile ha na-eme.